Izwe lethu elikhulu nelinhlobonhlobo linamanye amazwe angu-252, ngayinye yalo enezici zayo kanye nezincazelo ezithile. Sizwa ngezinye izinkulumo nsuku zonke. Mayelana nabanye - kuphela ngezikhathi ezithile. Kulungile ukuphawula amaqiniso athakazelisayo ngamazwe omhlaba, okungaveli kuwo njalo.
Lesi yisimo sokuqala ezweni lonke laseNtshonalanga, okwakhiwa isitimela. Kwenzeka eminyakeni engu-18 ngaphambi kokwakhiwa kwesitimela e-UK. Ngendlela, kuze kube ngu-1962 i-Jamaica yayiyingxenye ye-United Kingdom.
I-Kingston yiyona dolobha enkulu kunawo wonke wesifundazwe nesiqhingi sayo. Futhi kwaba ezindaweni zakhe ezimbi ukuthi isitayela esisha somculo savela, njengo-reggae.
I-Jamaica iyizwe elinokholo kakhulu. Kuzo zonke izikole zomphakathi, usuku luqala ngomthandazo ekuseni. Futhi i-Jamaica inenani elikhulu kakhulu lamasonto ngamakhilomitha amabili emhlabeni wonke. Kunezinkulungwane ezingaphezu kuka-1 600 zazo, futhi leyo nombolo ayiyona yokugcina - emva kwakho konke, njalo ngonyaka amasonto ayanda.
Futhi kufanelekile ukwazi ukuthi i-Jamaica yiyona yokuqala yokukhiqiza ibhanana yezohwebo kulo lonke elaseNtshonalanga yeHemisphere.
Ukutshela amaqiniso athakazelisayo ngamazwe omhlaba, akunakwenzeka ukuba ungakunaki nalesi simo. I-Estonia ibhajwe ngezinhlangothi ezintathu ngasolwandle - kungenxa yalesi sizathu ukuthi i-1/5 yensimu yayo ihlala emanzini.
Imvelaphi yegama lenhloko-dolobha, okuyi-Tallinn, ayisaziwa. Kunezinketho eziningana ezingenzeka - "idolobha laseDenmark" njengesibonelo. Kodwa ayikho incazelo ecacile. Kanye nempendulo yombuzo wokuthi ngabe incwadi eyodwa noma ezimbili zibhalwa ngencwadi eyodwa "n" ekugcineni,
Ulimi olukhulunywa ama-Estoni nalo luqobo kakhulu. Amagama amaningi aqala ngencwadi "s". Futhi inani lamacala alishumi nane. Futhi, ayikho isikhathi esizayo esi-Estonia, kodwa kunezinhlobo ezintathu ezidlule.
Ukutshela amaqiniso athakazelisayo ngamazwe omhlaba, asikwazi ukwehluleka ukuqaphela iqiniso lokuthi kunabantu abayi-1,315,000 abahlala kuleli zwe kuphela. Njalo ngonyaka, isilinganiso sezivakashi eziyizigidi eziyi-1.5 siza lapha, esingaphezu kwenani labavakashi basekhaya.
Futhi ekugcineni kufanelekile ukusho ukuthi eTallinn izithuthi zomphakathi zikhululekile. Ngemva kokuba yenziwe kanjalo, iningi labantu lathuthela enhloko-dolobha, futhi idolobha laqala ukuchuma.
Abaningi abazange bazwe ngisho nangalesi simo sasePolynesia sasePacific. Kodwa kubalulekile ukukhuluma, ukutshela amaqiniso athakazelisayo ngamazwe omhlaba.
Kuyathakazelisa ukuthi umbuso uhlakazeka eziqhingini ezingu-177, okuhlala kuzo okungama-36 kuphela. Indawo yonke yaseTonga ingu-750,000 km². Kodwa inani labantu alidluli abantu abayi-100,000.
Embusweni, ukuqhuma kwe-volcanic kwenzeka kaningi. Emakhulwini amabili eminyaka edlule kwakunezingu-35 zazo. Okokugcina kwakuneminyaka engu-56 edlule.
Isimo sokuphila lapha akuyona into engcono kakhulu. Izakhamuzi zinezinkinga ezinkulu ngamanzi okuphuza. Ukuze basinde, kufanele basindise imvula ngamathangi akhethekile. Kodwa lapha kunezinqolobane ezingu-6 namapaki amazwe amabili. Futhi bambalwa kakhulu abantu abazi ukuthi iTonga igcina ubudlelwane obumbano neRussia.
Leli dolobha lombuso, eliseningizimu-mpumalanga ye-Asia, lithandeka kakhulu. Futhi kufanele kuqashelwe ngokucophelela, ukutshela amaqiniso athakazelisayo ngamazwe omhlaba.
Bambalwa abantu abazi ukuthi iSingapore lakhiwe ngokugcwele yi-feng shui. Lapha, ngisho nezihlahla zitshalwe ngokucabangela umqondo wasendulo waseChina. Futhi isondo likaFerris lijikeleza nge-clockwise - kuyakholelwa ukuthi lena yindlela yokudala ukugeleza okukhulu kwemali edolobheni.
ESingapore azikho izimoto zomgwaqo. Okokuqala, ngoba imigwaqo lapha nayo yakhiwa ngu-feng shui. Futhi okwesibili, ukuze uthenge imoto, kumele uqale ukuthenga imvume kulokhu endalini, intengo yezinye izikhathi ifinyelela ku-$ 100,000.
Futhi kufanele ukwazi ukuthi eSingapore kunesijeziso sokufa, esisongela amasela, abadlwenguli, amakhosi ezidakamizwa. Ngenxa yobugebengu obubi kakhulu, bajeziswa ngesibhamu. Futhi izinhlawulo zilotshwe lapha cishe cishe zonke izigameko. Ngisho neqiniso lokuthi indoda yathululela imbali ngamanzi amaningi, izinsalela zazo ezihlelwe nge-saucer. Umswakama udonsela omiyane, lapho iziphathimandla zazinzima khona ukuqeda umuzi, ukuqeda u-malariya nomkhuhlane. Ngandlela-thile, amaphoyisa aseSingapore angasetshenziswa ngokungajwayelekile. Ngoba ukulondeka kwenziwa lapha ngokusebenzisa amakhamera wevidiyo, afakwe ngokoqobo kuwo wonke amakhon.
Lo Mbuso waseScandinavia kufanele uqaphelwe ngokucophelela, uxoxe amaqiniso athakazelisayo ngamazwe ahlukene emhlabeni.
E-Norway, ayamukelekile ukungena enkulumweni yezingxoxo nabantu abangabazi ngesikhathi sokuthutha komphakathi, ngisho nangobuso obunobungane nabomomothekayo. Lokhu kungabhekwa njengokuziphatha okungaphili. Ngokuvamile, abantu bendawo bayabantu abafunde kakhulu. AmaNorway yizwe elifundwa kakhulu emhlabeni, futhi uhulumeni ngokwawo uphephile kakhulu futhi unokuthula emhlabeni wonke. Mhlawumbe, yingakho abantu abaningi bafuna ukuhambisa lapha. Ngakho, isibonelo, e-Oslo 1/3 yabantu yizivakashi ezivela emazweni asathuthuka.
Kuleli zwe likhulu ngempela. Kukhona kuphela abantu abayizigidi ezingu-5 kuphela, okusho ukuthi ku-1 km² kukhona abantu abangu-16 kuphela. Lokhu kuzwakala kuyethusa, kodwa phakathi nekhulu leshumi nane, lesi sifo sathi impilo yabantu abangaphezu kwengxenye eyodwa kwesithathu yabantu bendawo!
Futhi lapha, ngaphambi kuka-995, lapho ubuKristu befika eNorway, onkulunkulu bamaqaba iTorah no-Odin bathandaza.
Ukubhala amaqiniso athakazelisayo ngamazwe omhlaba wezingane, kudingeke ukuthi sikhulume le Grand Duchy. Into kuphela emhlabeni futhi.
Leli lizwe lamazwe amancane kakhulu emhlabeni. Indawo yayo i-2 600 km² kuphela, futhi insimu yayo ingabantu abangaba yingxenye yezigidi. Kodwa i-Luxembourg ephakathi kwezintathu phakathi kwamazwe e-EU ngokusebenza kahle kwebhizinisi. Umzila wokuqala nesesibili wokulinganisa uhlala yiFinland neDenmark.
Futhi-ke kukhona i-SMIC ephakeme kakhulu emhlabeni. Okwamanje yi-1 642 euro (cishe ama-ruble ayi-113 000). Futhi isibonakaliso sikhula njalo! Futhi i-GDP eLuxembourg iyona ephakeme kakhulu - kathathu ngaphezu kweYurophu ejwayelekile. Kodwa kunenani elimangalisayo lokubhala nokubhala (amaphesenti angu-100!) Futhi imfundo, engenye yezinto ezinhle kakhulu emhlabeni. Ngemuva kohlu olunjalo lwamaqiniso, akumangalisi ukuthi lonke i-Luxembourg lifakwe ohlwini lwezamagugu e-UNESCO.
Asikwazi ukukhohlwa ngalesi simo esincane, sisho amaqiniso athakazelisayo kakhulu ngamazwe omhlaba. Kwakuse-Ireland ukuthi indoda eyakha i-White House yazalwa. Ungumakhi uJames Hoban.
Ifulegi yezwe lifana ne-Italy neCote d'Ivoire. Abantu base-Ireland abanandaba ngempela. Kodwa zinobuqili obukhethekile zibhekisela kumbala. Uma nganoma yikuphi ithuba lokuthi kukhona umbala we-orange efulethini lase-Ireland, kunengozi yokugijima ehlazweni. Wonke umuntu wase-Ireland uzocasuka, ngoba akulona i-orange, kodwa igolide.
Isi-Irish (Gaelic) sifundwa ezikoleni kuleli zwe, kodwa ekugcineni, izingane zendawo zikhuluma njengeziNgisi.
Bambalwa abantu abazi ukuthi kuleli zwe leli phaleni yebhola, i-cube kaRubik yasungulwa, izitsha ezinjenge-goulash ne-salami sausage. Futhi nansi echibi elikhulu kulo lonke elaseYurophu Ephakathi - iLake Balaton. Indawo yakhona ibiza ngokuthi i-Hungarian Sea. Futhi kuHungary ukuthi ichibi elikhulu kunazo zonke elishisayo emhlabeni. Ibizwa nge-Heviz.
Kumele futhi kuqaphele ukuthi eBudapest, inhloko-dolobha yezwe, kukhona i-tram ende kunazo zonke emhlabeni. Ubude bayo budlula ngamamitha angu-50! Futhi izitimela ezisetshenziselwa umgwaqo zenziwa eRussia (eMytishchi).
Ekugcineni ngingathanda ukukhuluma ngezikole emazweni ahlukene emhlabeni. Amaqiniso anesithakazelo angase ashaqiswe. Isibonelo, abafundi bezikhungo zemfundo ePapua New Guinea bangakwazi ukugqoka izingubo.
Kweminye imizi yaseNdiya, isimo semfundo sidabukisayo kangangokuthi izingane zesikole zifundiswa ... izingane ezifanayo nazo. Kukhona isikole esinjalo edolobheni laseMurshidad. Ufundisa izingane lapho, ulwazi lwe-podcherpnuvshie ohlangothini. Ngokuvamile, eNdiya, abazali bakhathazeke kakhulu ngokuphumelela kwezingane zabo. Ngakho-ke uma izivakashi zibona abantu bevusa amafasitela efasitela, umuntu akanakumangaza: laba bantu abadala bazama ukutshela izingane zabo izimpendulo ezifanele kumbuzo wokuhlola, ukuze bakwazi ukunikela ngokuphumelelayo konke. Kuhlonishwa ukuthola imfundo.
Emazweni ahlukene emazwe ahlaba amaqiniso athakazelisayo ngendlela yawo siqu abonisa lokhu noma leso simo. E-Indonesia, isimo sezomnotho siyadabukisa kakhulu - wonke umuntu uyazi lokhu. Esigodini saseLevak, isibonelo, kukhona isikole esisodwa kuphela, bese-ke, ukungena kuwo, udinga ukunqoba ibhuloho lokumisa eliyingozi, okuyinto nganoma isiphi isikhathi ongakwazi ukungena emfuleni.
Kwezinye izindawo zokuhlala ePhilippines, izingane ziya esikoleni, izibhuku zokubhukuda ezikebheni ezincane. Futhi eColombia, abafundi bawela umfula iRio Negro, behamba ngekhebula elingamamitha angu-400 kuya kolunye uhlangothi lolwandle, njengoba kukhona isikole lapho.
Noma kunjalo, kunamaqiniso amaningi athakazelisayo mayelana nezwe lethu, futhi uma ufuna, ungazijwayeza wena ngokwakho. Ngoba kunzima kakhulu ukubhala konke.
IBoston i ... Uphi umuzi waseBoston?
Kuyini wentaba? Meaning of igama elithi "wentaba"
UPyotr Petrovich Luzhin, "Ubugebengu Ziyisijeziso": uhlamvu
Koshkinskoye ubisi: izici, umkhiqizi kanye nokubuyekeza